Kungani kungekho 777 ye-P3D V4?
Umbuzo Kungani kungekho 777 ye-P3D V4?
unyaka 1 2 edlule #894 by Josh13215
Kuze kube yilapho ngingakwazi ukuthola okungeziwe kwe-777 ye-P3D V4. Kungaba khona 'akukho ukubuka kuqala okutholakalayo' noma akusekeli i-P3D V4. Ingabe kukhona umuntu onesidingo sokusebenza se-777 se-V4?
Siyabonga kusengaphambili abafana
unyaka 1 2 edlule #896 by Gh0stRider203
Lokhu kuhlanganiswe izikhathi ezimbalwa ngaphambili. I-LOT yezindiza ngeke isebenze no-P3D V4 ngoba ayilungiselelwe, okwamanje. Nazi izintambo ezimbalwa engizitholile ...
unyaka 1 2 edlule #899 by Josh13215
Isikhathi ukudala page: 0.306 imizuzwana